Pramipexole - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pramipexole
Generic Name: Pramipexole Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pramipexole ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pramipexole ကိုParkinson’s disease လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်အာရုံကြောရောဂါကိုကုသဖို့အတွက်တစ်မျိုးတည်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအသုံးပြုပါတယ်၊၎င်းဟာသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးကြွက်သားတုန်လှုပ်ခြင်း၊တောင့်တင်းခြင်း၊ကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းနဲ့ပုံသေမဖြစ်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေပါတယ်။ ကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အကြိမ်ရေတွက်(on-off syndromeလို့ခေါ်ပါတယ်)ကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
ယခုဆေးကိုRLS လို့ခေါ်တဲ့ခြေထောက်များဂနာမငြိမ်ဘဲလှုပ်ရှားနေခြင်းအခြေအနေကိုကုသဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာညဘက်မှာပိုဖြစ်တတ်ပြီးခြေထောက်တွေမှာမအီမသာဖြစ်ခြင်းမျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆေးဟာအဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျော့ကျစေပြီးသင့်ကိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Pramipexole ဟာ dopamine ကိုအားပေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ယခုဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအစာရှိချိန်မှာရောမရှိချိန်မှာပါသောက်ဆေးအဖြစ်သောက်သုံးနိင်ပါတယ်။ ဆေးကိုအစာနဲ့တွဲသောက်ပါကပျို့ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ(ဥပမာ မူးဝေခြင်း၊သွေးပေါင်ကျခြင်း)ရနိုင်ချေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်သင်pramipexoleကိုပထမဆုံးအကြိမ်သောက်စဉ်မှာသင့်ဆရာဝန်ကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးပမာဏရောက်တဲ့အထိဆေးပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆေးကိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသောက်ပါ။ ဆေးပမာဏတိုးသောက်ခြင်း၊အကြိမ်ရေတိုးသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ယခုဆေးကိုရက်အတော်ကြာမသောက်ဘဲနေပါကစသောက်သောက်ချင်းပမာဏကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တိုးသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကိုဘယ်လိုပြန်စသောက်ရမလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲဆေးသောက်ခြင်းကိုမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုပေမယ့်ယခုဆေးကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်ပါကဆေးဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလက္ခဏာတွေကတော့ဖျားခြင်း၊ကြွက်သားများတင်းတောင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပါကဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ သင့်မှာParkinson ရောဂါရှိပြီးဆေးပုံမှန်သောက်ခြင်းကိုရပ်တော့မယ်ဆိုပါကဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆေးပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ခြင်းဟာဆေးဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေမရအောင်တားဆီးပေးပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုတိုင်ပင်ပါ။
Pramipexoleကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Pramipexoleအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းပုံလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Pramipexoleကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pramipexole အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Pramipexole ကိုအသုံးမပြုခင်သင့်မှာယခုဆေးနဲ့သို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်တာမျိုးတွေရှိရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ ယခုဆေးမှာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေသို့မဟုတ်တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးကိုအသုံးမပြုခင်သင့်ရဲ့ရောဂါရာဇဝင်အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့် သွေးပေါင်ကျခြင်း၊နှလုံးရောဂါများ(ဥပမာ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း)၊ကျောကပ်ရောဂါများ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ(ဥပမာ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ရူးသွပ်ခြင်း၊စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း)နဲ့အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူမမှန်ခြင်းများ(ဥပမာ အိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှူရပ်ခြင်း၊နေ့ဘက်တွင်အလွန်အကျွံအိပ်ခြင်း)တို့အကြောင်းကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးဟာမိခင်နို့ရည်ထဲကိုသွားနိုင်ပြီးနို့စို့နေတဲ့ကလေးအပေါ်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့ထွက်ခြင်းကိုလည်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ယခုဆေးကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကလေးနို့တိုက်ခြင်းကိုမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ကလေးနို့တိုက်ခြင်းမပြုလုပ်မီသင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pramipexole ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPramipexoleကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Cလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Pramipexole ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တကယ်လို့သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရရှိပါကဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ သတိလစ်ခြင်း၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း(ဥပမာ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊စိတ်ကျုခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊သတိမေ့ခြင်း)၊ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်အားထက်သန်ခြင်းများ(ဥပမာလောင်းကစားပြုရန်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာခြင်း၊လိင်ကိစ္စများတွင်ပို၍စိတ်အားထက်သန်လာခြင်း)၊လှုပ်ရှားရ၊လမ်းလျှောက်ရခက်ခဲခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်း၊ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်လျော့ကျလာခြင်း၊ခန္ဓါကိုယ်ပိုတုန်လာခြင်း၊ပိုတောင့်တင်းလာခြင်း၊ခြေကျင်းဝတ်နဲ့ခြေထောက်များရောင်ခြင်း။
တကယ်လို့သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေခံစားရပါကဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ဖျားခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊နှေးခြင်း၊မမှန်ခြင်း၊ကြွက်သားများနာခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊မောပန်းခြင်း၊ကျောက်ကပ်ရောဂါရဲ့လက္ခဏာများ(ဥပမာ ဆီးပမာဏပြောင်းလဲခြင်း)၊အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း။
Pramipexoleကိုအသုံးပြုနေတဲ့တချို့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေ(ဥပမာဖုန်းပြောခြင်း၊ကားမောင်းခြင်း)လုပ်နေစဉ်မှာပဲရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေမှာမူးဝေခြင်းလုံးဝမရှိဘဲအိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာယခုဆေးကိုအချိန်အတော်ကြာအောင်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှယခုလိုအိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုရတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာယခင်ကထက်ပို၍အိပ်ငိုက်လာခြင်း၊နေ့ဘက်တွေမှာအိပ်ပျော်သွားတတ်ခြင်းစတာတွေကိုခံစားရပါကအဲဒီအကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့မဆွေးနွေးရသေးသ၍ကားမောင်းခြင်းနဲ့အခြားအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။ အရက်သောက်ခြင်းနဲ့သင့်ကိုမူးဝေစေတဲ့အခြားဆေးတွေအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင့်ကိုပိုပြီးအိပ်ပျော်စေနိင်ပါတယ်။ သတိပြုရမယွအရာများအကြောင်းကိုလည်းဆက်ဖတ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Pramipexole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင့်ကိုမူးဝေစေနိုင်တဲ့အခြားပစ္စည်းတွေဥပမာအရက်၊ဆေးခြောက်၊antihistamines(ဥပမာ cetrizine,diphenhydramine),အိပ်ဆေးများ(ဥပမာ alprazolam,diazepam,zolpidem)၊ကြွက်သားများဖြေလျော့စေတဲ့ဆေးများ(ဥပမာ carisoprodol,cyclobenzaprine)နဲ့မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့်ရသောနာကျင်မှုများကိုသက်သာစေသောဆေးများ(ဥပမာ codeine,hydrocodone)စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုနေပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ၊
သင့်ရဲဆေးအားလုံး(ဥပမာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းအတွက်သုံးတဲ့ဆေးများနဲ့အအေးပတ်ခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်သုံးတဲ့ဆေးများ)ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆေးညွှန်းတွေကိုစစ်ဆေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အဲဒီဆေးတွေမှာသင့်ကိုမူးဝေစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးတွေကိုဘေးကင်းကင်းသုံးနိုင်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းပါ။
Pramipexoleကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pramipexole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pramipexole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pramipexoleဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pramipexole ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
-levodopa နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာတစ်နေ့ကိုဆေးနှစ်ခုပေညင်းပမာဏ၈၀၀မီလီဂရမ်ရအောင်levodopa ပမာဏကို၂၇ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ပေးပါတယ်။
ဆေးပမာဏထိန်းညှိခြင်း:ဆေးကို၅ရက်မှ၇ရက်ထက်မပိုစေဘဲပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပါ။ ပထမအကြိမ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကိုဝ.၇၅မီလီဂရမ်တိုးသင့်ပြီးနေ့တိုင်းဝ.၇၅မီလီဂရမ်ဆီဆက်တိုးသွားပါ။ ဆေးတစ်ကြိမ်ဆီတိုးပြီးတိုင်းမှာလူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုအနည်းဆုံး၅ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ပါ။
-ပြင်းထန်တဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက်(CrCl 15မှ30mL/min):ပထမအကြိမ်:ဆေးဝ.၁၂၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏဖြစ်တဲ့တစ်နေ့ကိုဆေးဝ.၅မီလီဂရမ်ရောက်အောင်၅ရက်ကနေရရက်ကြာတိုင်းဆေးပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားပါ။ အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏ:ဆေး၁.၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
-အလယ်အလတ်ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက်(CrCl 30မှ50mL/min):ပထမအကြိမ်:ဆေးဝ.၁၂၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏဖြစ်တဲ့တစ်နေ့ကိုဆေးဝ.၇၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ခြင်းရောက်အောင်၅ရက်ကနေရရက်ကြာတိုင်းဆေးပမာဏကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားပါ။ အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏ:တစ်နေ့ကိုဆေး၂.၂၅မီလီဂရမ်။
အလယ်အလတ်ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက်(CrCl30မှ50mL/min):ပထမအကြိမ်:ဆေးဝ.၃၇၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်ရက်ခြားစီသောက်ပါ။ တစ်ပတ်အကြာမှာဆေးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့လူနာရဲ့ခံနိုင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးဆေးကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သို့တိုးသောက်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့၇ရက်ကြာတိုင်းဆေးဝ.၃၇၅မီလီဂရမ်ကိုတိုးပါ။ အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏ:တစ်နေ့ကိုဆေး၂.၂၅မီလီဂရမ်သောက်ပါ။
တကယ်လို့လူနာဟာlevodopa ဆေးသောက်နေပါက levodopa ဆေးပမာဏကိုလျှော့ရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
-Parkinson ရောဂါအတွက်:နေ့စဉ်သောက်တဲ့ဆေးပမာဏဝ.၇၅မီလီဂရမ်အထိရောက်အောင်ဆေးကိုတစ်နေ့လျှင်ဝ.၇၅မီလီဂရမ်စီလျှော့ပါ။ အဲဒီနောက်တစ်နေ့ကိုဝ.၃၇၅မီလီဂရမ်စီလျှော့ပါ။
-Parkinson ရောဂါဖြစ်ခါစလူနာတွေမှာတိကျတဲ့ဆေးပမာဏနဲ့စမ်းသပ်ချက်အရတစ်နေ့ကိုဆေးပမာဏ၃မီလီဂရမ်၊၄.၅မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်၆မီလီဂရမ်ပေးခြင်းဟာတစ်နေ့ကို၁.၅မီလီဂရမ်ပေးခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုမတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဆေးပမာဏတိုးသောက်ခြင်းကြောင့်အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေပိုရလာပါတယ်။ ထိုင်ရာမှထစဉ်သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊အိပ်ငိုက်ခြင်း၊မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း။
-အရေပြားဆိုင်ရာ:melanoma လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားကင်ဆာရောဂါကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့အရေပြားကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Pramipexole ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pramipexoleဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Pramipexole Dosage. https://www.drugs.com/dosage/pramipexole.html. Accessed April 9, 2018.
Pramipexole DIHYDROCHLORIDE. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-3680-5007/pramipexole-oral/pramipexole-oral/details. Accessed April 9, 2018.